ထိပ်တန်း5ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးညပွဲလမ်းနှင့်အတူမြို့ကြီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ထိပ်တန်း5ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးညပွဲလမ်းနှင့်အတူမြို့ကြီးများ
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ခရီးသွားလာ အဆိုပါမြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည် - ဒါပေမဲ့သင်သာပျော်စရာရှိသည်ဖို့အဘယ်အရာကိုလိုလျှင်? ထိုကိစ္စတွင်, အကောင်းဆုံးကိုတွေကတော့နှင့်အတူမြို့ကြီးများရှိပါတယ်, နှင့်ရထားအဲဒီမှာရတဲ့လွယ်ကူပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်.
ပါတီတိရစ္ဆာန်များအဘို့, အတော်လေးများကဲ့သို့ဘာမှမရှိဘူးင် ကြုံတွေ့နေရ အသစ်တစ်ခုကိုမြို့တွေကတော့. ဥရောပ၌လုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာခပ်သိမ်းသောမြို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနေပါတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ထိပ်မှာတစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ5မြို့ကြီးများကိုအကောင်းဆုံးတွေကတော့နှင့်သင်အများဆုံးပျော်မွေ့ရာတစျခုကိုတွေ့မြင်:
1. ဘာလင်ရဲ့ညပွဲလမ်း, ဂျာမနီ
သငျသညျထိပ်မှာဘာလင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်5အကြောင်းပြချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးတွေကတော့နှင့်အတူမြို့ကြီးများ. အဆိုပါမြို့ဥရောပတိုက်တွင်သူမတူနိုင်တဲ့သောတက်ကြွခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သော Club မြင်ကွင်းတစ်ခုရှိပါတယ်. ဘာလင်တူသောစိတ်တွေအများကြီးကိုဆွဲဆောင် ပါတီတိရိစ္ဆာန်များ. ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မြောက်မြားစွာကလပ်တစ်ခုအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်ဖို့နီးပါးတစ်ဦးအာမခံချက်မယ့်အဘယ်ကြောင့်ဖွင့်. Berghain သေချာသည်မြို့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးနိုက်ကလပ်, အဖြစ်အများဆုံးသီးသန့်တ ဦး တည်းနှင့်အချို့သော, ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလိမ့်မယ်. တစ်ဦးဓာတ်အားပေးစက်ရုံပြီးတာနဲ့, ယခုဘာလင်ရဲ့ Club မြင်ကွင်းတစ်ခု၏ငလျင်ဗဟိုချက်မှာင်. သငျသညျကွီးစှာသောအချိန်ရှာနေလျှင်သင်ကလာရောက်လည်ပတ်လက်လွတ်မနိုင်! ကံကောင်းစွာ, ရထားဘာလင်သို့ရောက်ရှိလွယ်ကူပါတယ် - သင့်ထံမှရှိရနိုင် အမ်စတာဒမ်, လန်ဒန်, နှင့် Frankfurt, အခြားမြို့များအကြား.
2. အမ်စတာဒမ်ရဲ့ညပွဲလမ်း, အဆိုပါ နယ်သာလန်
အမ်စတာဒမ် party ဖို့အကောင်းဆုံးတစ်ဦးအဖြစ်သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုထိုက်သောမြို့ကြီးများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာပေါ်ပြူလာင် ခရီးလမ်းဆုံး, အထူးသဖြင့်ကိုလက်ခံထားတဲ့အစွဲ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုများအတွက်, techno, ဟစ်ဟော့, နက်ရှိုင်းသောအိမ်သူအိမ်သား, နှင့် EDM. အရေးကြီးဆုံး၏အချို့ လည်ပတ်ရန်နေရာများ အဆိုပါများမှာ ဂိုဒေါင် Elementenstraat နှင့်သကြားစက်ရုံ. နှစ်ဦးစလုံးမှာ party အလွန်ကလပ်အသင်းများမှာ, သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာပေါ် မူတည်.. အရာတစ်ခုမှာသေချာဘို့ဖြစ်၏ - ထိုပါတီများရိုင်းများမှာ. အဆိုပါကလပ်သည်အထိပိတ်လိုက်ကြဘူး3သို့မဟုတ်4နံနက်။, ဒါကြောင့်ပျော်မွေ့ဖို့အချိန်အများကြီးရှိပါတယ်. မဆိုအဓိကကနေရထားနဲ့လက်လှမ်းမမီအမ်စတာဒမ် ဘာလင်နဲ့တူဥရောပမြို့ကြီးများ, ပဲရစ်, လန်ဒန်, နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်.
3. စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်
အေးယမ်ခုနှစ်တွင်, နှစ်ဦးစလုံးဒေသခံတွေနဲ့ ခရီးသွားဧည့် party ဖို့ဘယ်လိုသိကြ. စတော့ဟုမ်း သူတို့ကိုကလပ်တို့နှင့်ကြီးသောလူအစုအဝေး၏အမျိုးမျိုးရှိနေသော်ငြားလည်းကိုအကောင်းဆုံးတွေကတော့နှင့်အတူမြို့တို့တွင်ဖြစ်ပါသည်. ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံရဲ့မီးဖိုချောင်ကိုသင်စတော့ဟုမ်းအတွက်လက်လွတ်မငျနိုငျတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အထဲကစစ်ဆေးသေချာအောင်. ဤမြို့သည်အလွယ်တကူတခြားကနေရထားနဲ့ရောက်ရှိ ဥရောပရထားလမ်းအချက်အချာ.
4. ရောမမြို့, အီတလီ
ရောမမြို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့သမိုင်းဝင်လေထုမွို့၌ Club ၏အရည်အသွေးပိုကောင်းစေပါတယ်. Quintessentially အီတလီ, အတွက် clubbing ၏အတွေ့အကြုံ ရောမမြို့ လူတယောက်ဘဝကို-မေတ္တာရှင်ရှိပါတယ်, အဲဒါကိုပေါ့ပေါ့ကျက်သရေ. Big ကခုန်ကြမ်းပြင်, ဖော်ရွေဖျော်ယမကာစပ်, ပြီးပျော်စရာလေထုအောင် ရောမမြို့ရဲ့တွေကတော့ တစ်မူထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကို. အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ အီတလီကိုအလည်အပတ်ခရီးအကြောင်း များများရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ ရထားစီး. သူတို့ကဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်သွားချင်သငျသညျရနိုင်. သူတို့ထဲကတချို့ကမင်းကိုလမ်းတစ်လျှောက်မှာလှပတဲ့မြင်ကွင်းများနဲ့ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်.
5. လန်ဒန်, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
လန်ဒန်ဥရောပအကောင်းဆုံးတွေကတော့နှင့်အတူထိပ်ဆုံးငါးမြို့တို့တွင်ပြုလုပ်တတ်၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော Club မြင်ကွင်းတစ်ခုရှိပါတယ်. သငျသညျအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေနိုက်ကလပ်သို့လာရောက်နိုင်ပါသည်, burlesque ပြပွဲ, retro ကလပ်, နှင့်ဘာမှမကြား၌. ဒါဟာအကြီးအရာအရပျရဲ့ ပါတီမှ, နဲ့လန်ဒန်ကရတဲ့ ရထားလက်လှမ်းဖြစ်ပါသည် အများဆုံးအဓိကဥရောပမြို့မြို့တို့မှ. လန်ဒန်ကလပ်အတွေ့အကြုံကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့!
သင်၏နောက်ပါတီ-ရှာခရီးစဉ်များအတွက်အဆင်သင့်? ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း5ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးညပွဲလမ်းနှင့်အတူမြို့ကြီးများကိုသင်စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်, သငျသညျရှေ့တော်၌သွားရောက်ခဲ့လျှင်ပင်. သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ နှင့်ပျော်စရာများနှင့်ဂီတကိုခံစား!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-cities-best-nightlife%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#club လန်ဒန် တွေကတော့ ပါတီ ရထားအကြံပေးချက်များ travelamsterdam eng travelgermany netရာဝတီ